Tsvaga maitiro ekugadzira yekuParis-maitiro ekushongedza | Bezzia
Kushongedza muParis maitiro
Susana Garcia | | Decoration, Kushongedza maitiro
El Maitiro eParis akafuridzirwa neguta reParis, iro rinogara riri chirevo chekunaka uye fashoni. Pasina kupokana inzvimbo yakanaka yekutarisa kurudziro uye mazano kana uchishongedza imba yedu, kuitira kuti ive nechitarisiko chakanyanya, sekuraira kunoita mamiriro eParis. Tiri kuenda kunoona mamwe mazano ekushongedza imba muParis maitiro, dhizaini inogona kutsanangurwa seyakadzikama runako nemazambiringa anobata.
El Chimiro cheParis ndechimwe chakafuridzirwa neguta guru reFrance, nzvimbo iyo iwe yaunogona kuwana bohemian uye chic atmospheres. Ndokusaka iyi dhizaini, zvese mukushongedza uye mumafashoni, inowanzo kupa hanya zvishoma kune mafashoni uye inotsvaga yakawanda isingagumi, yakashongedzwa uye chic kubata.
1 Musanganiswa weBohemian
2 Inounza mwenje wakawanda
3 Tsvaga zvidimbu zvevintage
4 Yakagadzirwa uye inonzwisisika yakasarudzika
5 Usatsvage kukwana
Kusanganisa ndeimwe yekiyi dzemaitiro eParis. Sezvatiri kutaura, havawanzo kutevedzera maitiro vasina zvimwe, kana zvakanyatsotsanangurwa maitiro, asi ivo vanotsvaga avo chimiro chavo chekutsvaga zvinhu uye ruzivo rwavanonzwa kuzivikanwa uye kuti vanovada. Zano rakanaka rekugadzira musanganiswa uyu nderekutenga ruzivo rwechizvino-zvino uye nekuwedzera mamwe aunowana mumareki nemisika, chimwe chinhu chinowanzoitika mukati meParis. Tinogona kuwana pendi yakare padyo nevhasi ine dhizaini dhizaini. Pfungwa ndeyekuti iwe unofanirwa kusanganisa asi usingapfuuri, uchitsvaga zvidimbu zvakasarudzika, izvo zvatinoda uye zvinoratidzika. Izvi zvinofanirwa kuitwa pasina kutya, nekuti maParis vanoziva kuti avo vane dhizaini havasi kutya kusanganisa kuti vawane yakakosha yemukati dhizaini nehunhu.
Inounza mwenje wakawanda
La mwenje unowanzo kuve wakakosha mukati meParis. Mafurati ekare anowanzo aine mahwindo mahombe uye matenga akakwirira, achibvumira mwenje wakawanda kuunzwa mumakamuri. Nekudaro, kana tichida kunyangwe mwenje wekupinda tinokwanisa kuenda kumirazi, sezvavanoratidzira uye nekukudza nzvimbo, uye kune chena ruvara pamadziro nemabhodhi epasi. Kana isu tikapenda mabhodhi epasi akachena, madziro anozonyanya kutanuka.
Tsvaga zvidimbu zvevintage
Kana iwe uchida chaiyo Parisian maitiro, haufanire kurega vintage. Zvakajairika muParis kuwana misika yekupera kwevhiki kwaungawana zvidimbu zvakasarudzika zvine nhoroondo uye kuti vanogona kuva nehupenyu hwechipiri. Magirazi eakare, madhoti madiki, pendi dzakakosha uye zvimwe zvakawanda. Idzi diki diki ndidzo dzinopedzisira dzapa iyo nzvimbo yakanyanya hunhu, saka kana iwe uchida iyo yeParis inobata, haugone kurega kuwedzera vintage touch. Iwe unogona zvakare kusanganisira imwe fenicha yekare nechitarisiko chayo chepakutanga.
Yakagadzirwa uye inonzwisisika yakasarudzika
El ChiFrench chimiro chagara chakabatanidzwa neumbozha, kune iyo goridhe ruzivo uye nezvakawanda zvishongo. Nekudaro, isu tinoonawo maratidziro eParis ayo anotsvaga kubata kwakawanda kwazvo. Ndokusaka mune izvi zvekushongedza chic uye yakasvibirira kubata inowanzo kuwedzerwa asi zvine hungwaru nzira. Kenduru yekenduru iri mumba yekutandarira, girazi rakatemerwa negoridhe, kana zvimwe zvigadzirwa zvegoridhe zvinogona kuwedzera iko kubata.
Mune zvemukati zveParis hautsvage nzvimbo yemagazini. Humwe hunhu uye kusakwana zvinotsvakwa. Ndokunge, usaise mabhuku akarongedzwa neruvara, iyo fanicha nenzira yakafanana kana makapeti akanyatsoenderana. Isu tinoziva kuti maitiro eParis ane chimwe chinhu chebohemian uye nekudaro chisina kujairika, saka unofanirwa kugadzira kusakwana munzvimbo. Yambuka matagi, gadzira asymmetrical kuumbwa kwemifananidzo uye kunochengetera mabhuku mukona imwe. Kubata uku kuchaita mamiriro ekunze eParis uye asina hanya. Yakasanganiswa neaya anobata eumbozha iwe uchave uine rakabudirira kwazvo Parisian kushongedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Kushongedza muParis maitiro
Iko kushungurudzwa kwehupfumi kunowanzozviratidza mukati mevaviri
Yakachena chena, mubatanidzwa wezhizha